डाक्टर साबको शुभ साइत : मंसिर चार – ABC KHABAR
डाक्टर साबको शुभ साइत : मंसिर चार
November 12, 2015 November 12, 2015 ABC Desk राजनीति
भनिन्छ, मंसिर विवाहको लागि उत्युत्तम महिना हो । विविध कारणले शुभ महिना । त्यसैले, यसै महिनालाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि रोजेका छन् । मुुलुकमा नयाँ शक्तिको आवश्यक्ता रहेको भन्दै एमाओवादीवाट अलग भएका डा. भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माणका लागि आगामी मंसिर ४ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएका हुन्् ।
काठमाडौमा हुन लागेको नयाँ शक्ति निर्माणका लागि अभियान समिति बनाउन देशभरका प्रतिनिधिहरु भेलामा सहभागी हुने छन् । डा. भट्टराई समर्थक नेताहरुले डा. भट्टराईलाई नै आयोजक समितिको प्रमुख बनाउने तयारी गरेका छन् ।
देशभरमा नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका जिल्ला समितिहरु द्रुतत्तर रुपमा निर्माण भैरहेका छन् । सातै प्रदेशमा संयोजक तोकेका छन् । जसअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ मा पूर्व सभासद लीला भण्डारी, २ मा रामचन्द्र झा, ३ मा गंगा श्रेष्ठ, ४ मा वामदेव क्षेत्री, ५ मा देवेन्द्र पराजुली र ७ नम्बर प्रदेशमा नवराज सुवेदी खटिएका छन् ।
काठमाडौंमा मंसिर ४ गते राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षण हुनेछ । यसमा प्रत्येक जिल्लाबाट १० जनाका दरले प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने बताइएको छ । यो भेलाले नयाँ शक्ति निर्माण आभियान समिति गठन गरिने छ ।
ठीकै छ के चाहियो कुरा गरौँ : प्रधामन्त्री ओली
आज भाइटीका, साइत मध्याह्न ११ बजेर ५५ मिनेटमा